FX-Consultante – Ahoana no mba varotra eto amin'ny Financial Markets
1. Ny fomba varotra eto amin'ny vola Markets
2. fanatanjahan-tena: ny fomba hanaovana ny Voalohany ny hira fiovana
3. Inona no atao hoe hetsiky?
4. Inona no horaisintsika Profit?
5. Inona ny Stop Loss?
6. Tena ilaina ny tombana nanazava (hiteny ratsy Oil)
7. Tena ilaina ny fanadihadiana voafaritra (paoma)
8. Technical fanadihadiana: Fampidirana
9. 3 Golden torolalana ny fividianana sy ny fivarotana
10. Nahoana no mahay mpivarotra Mampiasa Libertex finday?
Maro ny olona mila Aoka hatao hoe manana vola matihanina lova na ny iray tapitrisa bucks mifandimby ao anatin'ny tsena ara-toekarena, na izany aza, izay raha ny tena marina tsy marina.
Korontam-olombelona varotra vola vahiny isan'andro, fa tsy mba heverinao ambony indrindra ny tena maha izy manao ny marina.
Azoko antoka fa efa nanakalo forex aloha noho ny mandeha amin'ny andro tsy fiasana, angamba eo amin'ny seranam-piaramanidina ny vola amin'ny alalan'ny varotra trano rantsan-kazo. dia ho namatsy vola ny sasany tamin'ny forex iray ary nahazo vola amin'ny hafa. Efa Nahazo ny zavatra niova indray ho amin 'ny fiovam-po nampitoetra vidin'ny tamin'izany fotoana.
Andeha mialoha fa tamin'izany andro izany dia tahaka ny vakansy, nisy ny vaovao fa ny tsy fananana asa saran'ny ao anatin'ny efa nandatsaka ny Etazonia sy ny anjara-raharaha greenback Etazonia dia ampitomboina dimy%. dieny mbola niverina ao an-toerana, ianao niova dolara amerika ambany indray ny vola vahiny teo akaiky teo, ary nahatsikaritra fa nanao 5% fidiram-bola.
Inona no nandalo eny? Amin'ny mora teny nataonao po: ny Kilonga ianao raha nividy US greenbacks, ny faharoa rehefa nivarotra izany ka nanao 5% tombony.
Manam-pahaizana mitovy mpividy manao po, fa, amin'ny safidin'ny ny mandray faritra any an-toerana varotra fifanakalozana eo amin'ny seranam-piaramanidina, dia hitranga amin'ny alalan'ny mora ny mampihatra Libertex sehatra an-tserasera, tao amin'ny finday, capsules sy ny solosaina ny. mpampiasa vola koa mahita fomba manantena vidiny hetsika, teny an-dalana mba hahazoana vola amin'ny fototra tapaka.
Aoka hojerentsika miaraka ny fomba ahafahanao mahazo amin'ny alalan'ny fampiasana fividianana sy ny fivarotana amin'ny tsenam-bola.
Mety hila rehetra ianao dia dimy minitra izany miadana, ny kaonty fihetsiketsehana miaraka amin'ny $5,000, ary roa-bola avy any ivelany tsiroaroa, EUR / USD sy ny USD / CHF.
Ireo mpivady ho ohatra tsara ho toy ny mpisolo tena nalaina Miovaova matetika, ary afaka hahazo tombom-barotra avy amin'izy ireo ao ihany 5 ny 30 minitra. Ianao tsy tokony hiandry ny hiverina amin'ny Excursion.
hamela ny Get nanomboka!
1. Mifidiana EUR / USD amin'ny lisitry pananana sy hanokatra ny hividy Alternate. mamela ny vola $500 miaraka amin'ny hetsiky zato ho toy ny ohatra.
2. Sokafy ny varotra iray hafa amin'ny USD / CHF ho-pananana, mampiasa ny hetsiky mitovy sy ny fampiasam-bola vola mitovy.
Fa izay rehetra fifanakalozana, ny broking sitrapony saran'ny kely fiampangana (ao anatin'ny mitovy fomba ara-bola ny fikambanana mety ho vidin'ny saran'ny forex). Mety hahita ity fifanakalozana ity vola an-baravarankely. fa mifanohitra amin'ny ara-bola andrim-panjakana, naniraka ireo mpivarotra maro fihenana.
3. Raha vao roa misokatra po, miandrandra dimy minitra na dia toy ny mijery po ny 'vokatra farany.
efatra. Raha ny fiovana voalohany tombony mihoatra ny fatiantoka ara-barotra iray faharoa, na ny isan-po ao amin 'ny vola, manakatona na mba hanidy noho ny vola miditra.
Rehefa nanokatra roa po araka ny hazavaina eto ary Na izany aza tsy afaka mahita na vola, aza manahy. Raha an-tsena dia tony, ianao dia tsy hahita ny Alternate, ka hiala izany manokatra fotoana.
Amin'izao tranga, USD / CHF fidiram-bola mihoatra ny EUR / USD very. mamela ny akaiky na po mba haka ny vola miditra eo amin'ny tantara.
Izahay fa nahazo vola miditra amin'ny USD / CHF amin'ny minitra vitsivitsy monja, ary tsy mampiasa fanombanana amin'ny fomba rehetra.
Ny hetsiky dia iray amin'ireo fitaovana fototra amin'ny Libertex. Tsy avelany ao aminareo ny fitomboana ny fifanakalozana ny tombony fahafahan'ny.
Ahoana no sary hoso-doko? Tena tsotra.
Hamela ny manantena anao hividy EUR / USD, ny fampiasam-bola be no $50, ary ny hetsiky dia iray. Raha ny anjara-raharaha miakatra 10%, ny vola miditra mety ho $ dimy ($50 X 10%).
Fa raha izay mifanohitra amin'ny iray ianao mamaritra 20 tahaka ny hetsiky ny fampiasam-bola vola hitsangana amin'ny $1,000 ($50× 20).
Rehefa nahita, ny vola dia ambony amin'ny alalan'ny 20, ary izany no fomba hetsiky asa.
Izany no toy ny velocity ny fiara: dia vao mainka izany lavitra, ny haingana no tonga amin'izay halehanao. Na izany aza, avo dia mitondra miaraka aminy haingana kokoa vintana. Izany no antony mahatonga tsirairay hery mifidy fiara ny dian'ny izay tsara ho an'ny tenany arakaraka ny revel in, rihana eny an-dalana sy ny toerana toe mpitsidika fehezan-dalàna.
Fa fahaizana mpivarotra, dia fahazoan-dalana ny fampiasana ny hetsiky kely dia kely, izay mitovy 1, izay tsy loza raha ny tsena hetsika ho anareo.
Rehefa nividy fahaiza-manao sy ny traikefa, dia azonao atao ny mampitombo ny hetsiky.
Raiso vola miditra dia mbola miandry hatrany mba ho manidy-in mpivarotra ny tombony.
mbola any aoriana Raiso mampiasa vola:
• Ndeha hevero tokony handeha hanokatra ny asa iray mandritra ny ora vitsivitsy, ary tsy azo hatrany ny hetsika fanaraha-maso ny anjara-raharaha. Ao amin'io toe-javatra, tokoa ianao Raiso toerana fidiram-bola ny filaminana sy fitsaharana ianao raha mitoetra matoky lohan'ny eny hitandrina ny sarimihetsika.
• Aoka ny mino fa tamin'izany andro izany rehefa mijery ny horonantsary-pananana ny saran'ny ny hetsika amin'ny fomba tsara. A Makà vola mba hita aloha dia hanidy-tombony amin'ny alalan'ny tery sisa ny asany, indray mandeha ny pananana mahatratra tsara fiampangana, mba manao vola na dia rehefa mijery ny horonan-tsary.
eto dia ohatra ny fomba toerana iray mba Raiso tombony:
• Manokatra ny EUR / USD Buy fanovana amin'ny 1.0620
• Ianao vola $500 miaraka amin'ny hetsiky ny 100
• jereo ny tabilao ho an'ny pananana amin'izao fotoana izao ny tahan'ny fara tampony indrindra. Amin'izao tranga, izany 1.0745.
• Ny Makà vola ilaina mba napetraka fotsiny teo ambanin'ny taha ambony indrindra, amin'ny eo ho eo 1.0725
• Mba hametraka ny vola Raiso mba ho an'ity notsongaina, voalohany hanokatra varotra miaraka amin'ny pananana ary avy eo mandehana mankany amin'ny mpivarotra
• Mifidiana ny EUR / USD fifanakalozana ianao vao nanokatra ary tsindrio eo amin'ny izany
• Mifidiana Quote avy amin'ny nijanona Loss / Raiso vola sakafo
• Ao amin'ny Raiso vola foto-kevitra, hametraka ny irina saran'ny, 1.0725 eo amin'ny raharaha, ary tsindrio eo amin'ny tsena
Ary ianareo tsy tokony hiasa saina momba ny saran'ny ny pananana fanitsiana, na dia tsy maintsy mandany ora maro Tracking ny tabilao. Raha mitoetra ny tanjonao vola miditra dingana efa tonga, ny varotra dia akaiky avy hatrany, sy ny vola miditra azo apetraka niaraka tamin'izay ny varotra kaonty.
Stop-Maty ny filaminana dia mbola miandry ampiasain'ny mpivarotra mba hampihenana risika.
Rehefa mandinika ny tsena, Mety diso fandray ny mpividy koa ny vidin'ny pananana hetsika izy ary iharan very. Mba hanalefahana ny fatran'ny mety very, ny mpivarotra sasany dia afaka manova ny vintana faritry mifototra voalohany indrindra eo amin'ny tsena tranga.
Izany miaro ny hampiseho aminareo, izay manana tabilao ho an'ny maro Nifanalavitra be ny fotoana, ary mety hanaisotra ny fihetseham-po antsipirihany raha manao safidy manan-danja ara-barotra. A misakana-Loss koa mba mamela anao handao ny lamba ny lohany, ary hijery horonan-tsary amin'ny fantatrareo-dia be ny fomba ny fandrahonana dia Tsikirity.
Right Indro misy ohatra iray ny fomba iray hisorohana-manodidina mba Loss:
• Manokatra ny EUR / USD fividianana fanovana amin'ny 1.0605
• ianao manao fampiasam-bola $500 miaraka amin'ny hetsiky ny zato
• Mba hametraka ny prévenir-Loss mba araka ny tokony ho, maka jereo kely ny tabilao noho ny anjara-raharaha ny pananana amin'izao fotoana izao indrindra fitontonganan'ny. kely dia kely ny toerana misy ny saran'ny.
• Ny fijanonana-Loss mba tokony napetraka fotsiny ambany ny tahan'ny kely dia kely, amin'ny about 1.0580
• Ny manodidina ny fijanonana-Loss mba ho an'ity notsongaina, voalohany hanokatra varotra amin'ny pananana Avy eo hitsidika My po
• Mifidiana ny EUR / USD varotra vao nanokatra ianao ary tsindrio eo amin'ny izany
• Mifidiana avy Quote avy amin'ny fisorohana ny Loss / Raiso vola sakafo
• Inside ny hahasakana Loss foto-kevitra, hametraka ny irina vidiny, 1.0580 eo amin'ny raharaha, ary tsindrio eo amin'ny fivarotana
Ary tsy mila matahotra ny taha-pananana ny fanitsiana, na dia tsy maintsy mandany ora maro Tracking ny tabilao. Ny loza dia ny kajy sy nikarakara.
Fototra Analysis Nohazavaina
Saram hiteny ratsy foana no manova fo, heriny izy ireo miaraka amin'ny fanampiana ny OPEC safidy, Afovoany Atsinanana ady, orinasa mpamokatra entana boosts any Iran sy ny zavatra isan-karazany be dia be.
Ohatra, Handeha ary horaisintsika ny vaovao nivoaka tamin'ny Janoary 2016: Rosia sy OPEC mba hampihenana Down hiteny ratsy Oil orinasa mpamokatra entana mba hahasakana ny hampiroboroboana-eny.
tamin'ny Febroary 16, 2016, OPEC sy Rosia nahavita mangatsiaka hiteny ratsy tokoa amin'ny orinasa mpamokatra entana.
tamin'ny Febroary 17, hiteny ratsy solika anjara-raharaha nitsambikina avy $32.29 ny $34.31 (6.telo%). Fa ny manaraka 20 andro, ny anjara-raharaha voatahiry amin'ny mitombo, ary tamin'ny Martsa 7, dia tonga $ 40.seventy enina, dia miakatra horesahin'ity 26.2%.
Vaovao Mafana anisan'izany ny filazana sy ny fifanarahana tena lehibe maneho ny isan'andro. azo atao mijery azy ireo ao amin'ny tele na amin'ny Internet. Fisehoan-javatra toy izany vola azo niseho toy ny varotra fanairana; amin'ny alalan'ny famakiana azy ireo, dia afaka milaza na ny tahan'ny ho miakatra naroson'ilay na lavo.
Ny fanaovana po amin'ny alalan'ny fomba io dia antsoina matetika hoe fototra tombana.
Ny fotoana andrasana ela, toy ny famoahana vaovao be iPhone, iPad, na MacBook, afaka tanjona filaharam-be amin'ny fivarotana. io fangatahana, mifandimby, Ankoatra izany dia mety hanan-kery eo mampivarahontsana miakatra hanoto ny anjara-raharaha ao amin'ny Apple boloky hazo.
Izany dia manome fahafahana tena tsara fitadiavam-bola ho an'ny mpivarotra na ny hira.
Andeha isika haka ohatra iray. tamin'ny Septambra 7, 2016, ny iPhone vaovao 7 ovana hahazo omena amin'ny ankapobeny.
Ny andro mitovy, Apple mizara nitsangana avy $107 ny $ dimy ambin'ny folo amby zato.
Ity hetsika ity Niova ho tafiditra ao amin'ny vavahadin-tserasera vaovao rehetra, toy izany isika rehetra (tena mety ho, anisan'izany ianao) afaka raisina momba izany.
Toy izany ny fanazavana momba ampahany malaza indrindra mpanamboatra, vokatra sy ny tolotra (Facebook, Microsoft, Google, Tesla, sy ny sisa.) dia nanomboka isan'andro, amin'ny Internet sy amin'ny fahitalavitra. Tsirairay amin'ireto asa atao ara-barotra dia famantarana fa aoka ianao mba hanao taha voalohany vola.
Po voalohany indrindra mifototra amin'ny toe-javatra vaovao sy ny fototra dia matetika antsoina hoe fanadihadiana, iray amin'ireo malaza indrindra fividianana sy ny fivarotana teknika.
Handray manam-pahalalana nividy sy nivarotra voafantina, izay ahitana na hividy na hivarotra ny pananana, tokony hanadihady tsena fandaniana. Amin'ny fampiononana, vidin-javatra ireo dia visualized ao ny endriky ny tabilao.
Raha misaina ny atmosfera tabilao ny mari-pana 2 decimal hevitra, dia mety hahita Nifanalavitra be fotsiny raha ny mari-pana ho matanjaka, i.e. raha mitoetra dia fluctuated an-mendrika eo amin'ny fizaran-taona isan-karazany ary avy eo nitombo mafy na amin'ny fahavaratra na amin'ny ririnina mihena.
Inona no nitranga ao amin'ny any an-dafin'ny mihitsy aza dia mampiseho ao amin'ny anjara - foto-kevitra io dia toy ny ampiharina amin'ny mari-pana tahaka ny any amin'ny tsena ara-toekarena. Izany no zava-misy ny amin'ny fototry ny fanombanana ara-teknika.
Hamela ny haka iray amin'ireo malaza indrindra Tech tombana fitaovana, fanohanana sy ny Fanoherana, ho toy ny ohatra.
Raha ny vidiny miakatra ary tampoka mihombo lalana, toy ny hoe mikapoka ny rindrina, tonga ny fotoana mba hampiroboroboana.
Rehefa latsaka ny tahan'ny ary avy eo indray mandeha fa nitontontontona ny, toy ny baolina fa nitontontontona ny eny amin'ny tany, tena tsara izany faneva ho amin'ny lohan'ny lava.
ny fampiasana ny sehatra ara-barotra, afaka misaina fanampiny-dalana, tabilao mba namely eo reversals, na mampiasa tondro izay manome anao hividy sy hampiroborobo ny famantarana.
Raha hanova mahomby sy tsy manana ahiahy, fotsiny manaraka ireo toro lalana telo Golden!
Mandrakariva mampiasa lamaody fividianana sy ny fivarotana. tafiditra ao ny manonona: Ny lamaody no namanao! Raha mahita ny saran'ny dia nampihetsi-po fotsiny ao amin'ny Mazava ho azy fa tsara, varotra izany no fomba. Tena mora kokoa matetika ny niara-nihazakazaka tamin'ny rivotra!
Avelao ny tombom-barotra mitombo, tahaka proscribing ny fatiantoka. Ny fidiram-bola mba mila mihoatra ny fatiantoka, izany fa tsotra! fa lavitra tena mitovy amin'ny ao amin'ny fisiana: hahazo fanampiny, mandany mainka. Ny fandrahonana / fiderana tahan'ny Tokony ho 1:2... na mihoatra!
eto no 1/3 fitsipika: mifehy ny vola. raha vao manomboka ianao hanova, mampiasa ny fampiasam-bola be sy ny multipliers, mba tsy vivery mihoatra noho ny 2% ny kaonty mandanjalanja. izany no fomba, tsy nahomby tari-by hafa mety ho mora kokoa noho ny fiara fitateram-bahoaka vidin'ny tapakila.
Ary noho ny fampiononana, dia efa nivoatra mpivarotra Tracker, tena misy fitaovana mba hanampy anao hifikitra ireo fitsipika raha mitoetra ianao manao ny dingana voalohany amin'ny maha-Mpivarotra.
Mandehana mijery ny toromarika mba hahita fomba varotra manaraka ireo fitsipika!
To varotra soa aman-tsara, te-handinika tsara ny tsena sy ny fihetsiky haingana ny fanairana-dry zareo ny fomba fandefasana. Ny Libertex alalan'ny terminal aterineto dia hanampy anao amin'ny tombana, dia tahaka ny sela Libertex App manao antoka fa tsy misy varotra nosoratan'i fahafahana. Mihoatra ny valopolo% ny mahomby mpampiasa vola mampiasa tsirairay alalan'ny terminal ny Libertex aterineto sy ny finday fampiharana Libertex.
Miezaha sary an-tsaina ny toe-javatra tatỳ aoriana: efa mahomby mihazakazaka ny tsena fanadihadiana ao anatin'ny harato Libertex alalan'ny terminal ka tapa-kevitra ny hanokatra ny asa, fa dia definately tsy maintsy handeha ny latabatra, ary nomena tratra tao amin'ny mpitsidika Jak, na angamba ianao handinika nandeha nijery sarimihetsika na nandeha nitsidika ny Pal. Amin'ny alalan'ny fampiasana ny Libertex mampiasa fampiharana finday afaka haingana ianao rehefa misy hetsika rehetra taha tamin'izany andro izany toy ny maha-lavitra lavitra avy amin'ny biraonao, i.e. afaka mifandimby amin'ny Mandehana, amin'ny fotoana rehetra, na aiza na aiza. Miaraka amin'ny fampiharana finday Libertex, azonao atao ny manova toerana misokatra, ary koa ny vaovao mivelatra po sy hanara-maso ny fiantraikany ara-potoana. Izany no ilaina manokana raha ny toe-draharaha ankapobeny tsena efa madio ho anareo.
Raha te-hitoerany ela any fanadihadiana, manao manan-danja voafantina, ny Libertex aterineto alalan'ny terminal no tena vahaolana tonga lafatra. Noho izany fividianana sy ny fivarotana sehatra, ianao dia nomena ny zava-drehetra ianao te-hanolotra: -pananana naoty, fanadihadiana ara-teknika fitaovana, sy ny famakiana vaovao. Toy izany koa, ny fandrika harato-monina tanteraka ny sehatra mamela hahasoa anao hahatakatra ny manam-pahaizana 'hevitra sy fehin-kevitra eo anatrehanao hanokatra fifanakalozana.
Download ny fampiharana finday alalan'i ny Andriod Market na amin'ny alalan'ny AppStore, ary hampiasa ny tranonkala amin'ny alalan'ny sehatra ny toerana tena navigateur.